Unoda gweta rekurambana ndiani achakubatsira iwe pachako?
Kune wese munhu, kurambana chiitiko chikuru. Ndokusaka magweta edu ekurambana ari pabasa rako nezano revanhu. Chekutanga mudanho rekurambana kufonera mumiriri wekurambana. Kurambana kunotaurwa nemutongi uye igweta chete ndiro rinogona kuendesa chikumbiro chekurambana kudare.
Kune wese munhu, kurambana chiitiko chikuru. Ndokusaka magweta edu ekurambana ari pabasa rako nezano revanhu.
> Magweta edu eparadzano anotsigira
> Kusangana negweta rinorambana? Aya ndiwo maitiro aunogadzirira!
> Ruzivo nezve kugadzwa
> Ndeapi magwaro andinofanira kuunza?
> Yako kambani uye kurambana
> Maitiro omunhu uye kutungamirirwa
Chekutanga mudanho rekurambana kufonera mumiriri wekurambana. Kurambana kunotaurwa nemutongi uye igweta chete ndiro rinogona kuendesa chikumbiro chekurambana kudare. Pane zvakasiyana siyana zvepamutemo nezvematanho ekurambana umo mutongi achatonga. Mienzaniso yeaya mamiriro epamutemo ndeiyi:
• Zvinhu zvako zvakabatana zvinogoverwa sei?
• Mumwe wawakatarisana naye ane kodzero yekuita chikamu chemudyandigere here?
• Zvakadiniko nezvemhedzisiro yemutero yekurambana kwako?
• Mumwe wako ane kodzero yekudyidzana neamony?
• Kana zvirizvo, huwandu hweakamony pamwedzi chii?
• Uye kana uine vana, nyaya dzinoenderana nezvevana dzinoitwa sei?
• Tsigiro yemwana inorongwa sei?
Magweta edu eparadzano anotsigira
Pane zvimwe zvimiro zvekugadzirisa kurambana. Gweta rekurambana kubva Law & More inogona kubatsira uye kukutungamira pakuronga izvi zvikamu pamwe sezvazvinogona. Magweta edu akasarudzika mumunda wemutemo wemhuri. Uri kuda kuziva kuti chii chatinogona kukuitira? Ipapo ndokumbira kuti ubate Law & More.
Magweta edu ekurambana ane nzira yemunhu uye anozoshanda newe kuti uwane mhinduro dzakakodzera mune ramangwana. Isu tinotarisa pane ese emutemo mamiriro uye tinoedza kuwana zvakanakisa mhedzisiro iwe.
Misoro yatingakubatsira nayo ndeiyi:
• Sungano yekurambana;
• Kuronga kubereka;
• Chibvumirano chevabereki;
• Kugoverwa kwezvinhu zvakabatana;
• Mwana alimony;
• Partony alimony;
• Kodzero dzevana dzekuwana mukana;
• Mari yemhedzisiro.
Kusangana negweta rinorambana? Aya ndiwo maitiro aunogadzirira!
Iwe nemumwe wako maita sarudzo. Uri kutora kurambana. Asi chii chinotevera? Nhanho yekutanga yakakosha mushure meiyi sarudzo inosvika kure nekufona mugweta rekurambana. Mushure mezvose, apo kurambana kunogadziriswa, kwete chete dzakasiyana-siyana dzinoshanda asiwo nyaya dzemutemo dzinomuka: Chii chichaitika kune yako yekubatana imba nekuzorora kwehomwe, semuenzaniso? Zvinozogoverwa sei mari yako yekuchengetera uye yemabhengi? Uye ndiani achatarisira kuchengetedza kwezuva nezuva kana kwemari kwevana vako? Kuti ukwanise kubatsira iwe sezvazvinogona nekuronga uye kureketa zvese zviri pamutemo zvakatenderedza kurambana, zvakakosha kuti gweta rako rekurambana riane ruzivo rwese uye zvinyorwa.
Ruzivo nezve kugadzwa
Paunenge uchigadzirira musangano negweta rako rekurambana, zvakakosha kuti iwe utaure nezvezvakakosha zviitiko zvakakosha newawakaroorana naye. Unoona sei ramangwana mushure mekurambana nezve imba yako yakabatana, mamiriro emari uye nevana vako vangangodaro? Kana pakave nechechibvumirano pamberi pekugadzwa, semuenzaniso nezve imba kana kuchengetwa kwezuva nezuva nekubatana nevana vako, ipapo gweta rakabatana rekurambana rinogona nyore uye nekukurumidza kunyora zvibvumirano izvi muchibvumirano chekurambana uye chirongwa chevabereki.
Hazvibviri here kukurukura uye kuita gadziriro dzakabatana newawakasiya naye? Wobva wafonera mune yako wega gweta gweta uyo anoedza kuzadzisa zvakanakisa mhedzisiro iwe. Muchiitiko ichocho, zvichiri kurongeka, mukugadzirira musangano negweta rako rekurambana, zvibvunze pachako zvinhu zvakakosha zvaungade kugadzirisa uye nenzira ipi. Semuenzaniso, iwe ungada here kuramba uchigara mumba uye kutarisira vana vako zuva nezuva? Muchiitiko ichocho gweta rekurambana rinogona kukuudza chaizvo izvo zvinogona uye zvinofanirwa kurongwa uye kuti ungazive sei gadziriro idzi.
Ndeapi magwaro andinofanira kuunza?
Izvo zvakakosha kuti utore mamwe magwaro akakosha uye uvaunzire kune yako yekudyidzana negweta rekurambana. Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kuuya nebhuku rako remuchato kana chibvumirano chekugara pamwe yekutora chibvumirano. Izvi zvinyorwa zvinopa gweta nzwisiso mune yako uye vako vekare chibvumirano chepamutemo uye inoumba nzvimbo yekutanga yezvimwe zvibvumirano. Iwe nemumwe wako wawakamboita naye une (rakabvarurwa) imba pamwechete here? Kana zvirizvo, iwe zvakare uchafanirwa kuunza yako tendi reti kana rejendi chibvumirano newe kumusangano. Mamiriro ako emari akakoshawo mune mamiriro ekurambana. Iwe unogona kupa gweta rako rekurambana pamwe nekutarisirwa kweakaundi ako ebhengi uye / kana maaccount akachengetedza, zvirevo zvegore uye mareta matatu ekupedzisira emitero. Uye pakupedzisira, ruzivo nezve pension yako, insurances uye chero zvikwereti iwe zvaungave wakanyawo zvakakoshawo.
Kana vana vakabatanidzwa, zvakakosha kuti zvido zvavo zvinyorwe zvakare. Isu tinova nechokwadi chekuti izvi zvinodiwa zvinoteererwa sezvazvinogona mumutemo. Magweta edu ekurambana anogona kuumba chirongwa chekurera pamwe chete newe icho chinogovaniswa chekuchengeta pamusoro pevana vako mushure mekurambana Isu tinokwanisa zvakare kuverenga huwandu hweyemamony yemwana kuti ubhadhare kana kugamuchirwa.
Wakatorambana here uye une kukakavara pamusoro, semuenzaniso, kuteedzerana nemudiwa kana mwana akabonyirwa? Kana iwe une chikonzero chekutenda kuti wawakamboroora naye iye zvino ave nemari yakakwana yekuzviriritira iye? Magweta edu ekurambana anogona zvakare kukupa rubatsiro rwepamutemo mune zvakadaro.
Yako kambani uye kurambana
Iwe une yako kambani uye uri kurambana here? Ipapo iwe unofanirwa kufunga nezvezve zvimwe zvinhu. Mibvunzo iyo magweta edu ekurambana anoongorora pamwe newe anosanganisira:
• Iwe une zvikamu here?
• Aya magovha ndeenharaunda yenzvimbo yezvivakwa here?
• Chii chinoitika kukambani yako pachako?
• Ndeipi mhedzisiro yekuparadzaniswa kwekambani yako pachako?
• Ndeipi mhedzisiro yemutero?
Maitiro omunhu uye kutungamirirwa
Kunyange isu tichikurudzira kumwe kugadzirira usati wabvunza negweta rako rekurambana, isu at Law & More nzwisisa kuti kurambana chiitiko chinosvika kure muhupenyu hwako uye kuti ungatadza kuona nekufunga ramangwana rako zvakananga mushure mekurambana. Ndokusaka Law & More'Matare edzimhosva ekurambana ane maitiro newe uye pamwechete newe uye pamwe wako wauchatarisana naye isu tichaona mamiriro ako epamutemo panguva yekutaurirana zvichienderana nezvinyorwa. Ticharatidza miono yako nezvishuwo zvako zveramangwana. Magweta anorambana a Law & More inyanzvi mumunda wevanhu nemutemo wemhuri uye vanofara kukutungamira, pamwe pamwe nemudiwa wako, kuburikidza nenzira yekurambana.